Kasem Lighting Co., Ltd na-agba mbọ n'ichepụta, injinia na imepụta ngwaahịa nchekwa ike ọhụrụ, ọnụahịa ọkụ dị ọnụ ahịa iji nye ndị ahịa anyị uru akụ na ụba na gburugburu ebe obibi dị mma.
Ụlọ ọrụ ahụ tọrọ ntọala site na otu ndị ọkachamara na-ahụ maka ọkụ ọkụ nwere ihe karịrị afọ 15 na-emepụta oriọna ụlọ ọrụ dị elu.Kasem Lighting eguzobela aha ya dị ka onye na-emepụta ọkụ a ma ama.
Ngwaahịa Kasem Lighting na-enye ọkụ ọkụ dị elu nke na-ejikọta akụ na ụba, ntụkwasị obi na ike ike na ngwa ọkụ.Ahịrị ngwaahịa anyị pụrụ iche gụnyere obere profaịlụ na ike dị elu LED iju mmiri, oriọna n'okporo ámá LED, ike anyanwụ, ọkụ ogige, ọkụ ọkụ dị elu ... wdg. na ụdị ọkụ dị n'èzí.
N'otu oge ahụ, iji gboo mkpa ahịa, na 2016, ọ na-anwale nyocha na mmepe na mmepụta nke batrị lithium nke anyanwụ, ma mepụta nke ọma na-arụ ọrụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ oge ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ oge ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ.O nwetala ọtụtụ akwụkwọ ikike mba na ejiri ya mee ihe n'ịrụ ime obodo ọhụrụ.Otuto dị elu sitere n'aka ndị ahịa.
Anyị na-agba mbọ maka ịdị mma na ịdịte aka na oriọna ọ bụla iji hụ na ndị ahịa anyị na-atụ anya ogologo ndụ na enweghị nsogbu.Anyị na-arụkọ ọrụ ogologo oge na ụlọ ọrụ ndị na-eduga na ụlọ ọrụ ahụ ma na-akwakọba akụ nke ngwaahịa na ihe ọmụma ngwa, nke na-eme ka anyị ruo eruo inyere gị aka na obere ọrụ ọkụ ọkụ.
Omenala ụlọọrụ anyị
Kemgbe e guzobere Kasem Lighting na 2009, ndị otu R&D anyị etoola site na obere otu ruo ihe karịrị mmadụ 100.Mpaghara nke ụlọ ọrụ ahụ amụbaala ruo 50.000 square mita, ntụgharị na 2019 eruola 25.000.000 US dollar n'otu oge.Ugbu a, anyị aghọwo ụlọ ọrụ nwere ọnụ ọgụgụ ụfọdụ, nke nwere njikọ chiri anya na omenala ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ anyị:
Isi echiche bụ "Kasem Lighting, Beyond Self".
Ọrụ ụlọ ọrụ bụ "ịmepụta akụ na ụba na ọha mmadụ na-erite uru".
Anwa anwa imewe ihe ọhụrụ: Àmà bụ́ isi bụ ịnwa anwa ime, anwa anwa ịnwa, chee echiche na ime.
Jisie ike na iguzosi ike n'ezi ihe: Jidesie iguzosi ike n'ezi ihe bụ akụkụ bụ isi nke Qassim Lighting.
Ilekọta ndị ọrụ: itinye ego iri puku kwuru puku yuan kwa afọ maka ọzụzụ ndị ọrụ, guzobe ụlọ nri ndị ọrụ, ma nye ndị ọrụ nri nri atọ kwa ụbọchị n'efu.
Mee ike anyị niile: Wanna nwere nnukwu ọhụụ, chọrọ ụkpụrụ ọrụ dị oke elu ma na-achụso "ime ka ọrụ niile bụrụ ezigbo ngwaahịa."